Weerar ka dhacay magaalada barakeysa Qudus – SAWIRO • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Weerar ka dhacay magaalada barakeysa Qudus – SAWIRO
Weerar ka dhacay magaalada barakeysa Qudus – SAWIRO
Ugu yaraan sadex qof ayaa ku dhimatay weerar hubeysan oo saaka ka dhacay nawaaxiga masjidka weyn ee Al Aqsa ee magaalada barakeysan Qudus.
Waxaa weerarkan ku geeriyooday laba askeri oo Isra’iiliyiin ah, waxaana ku dhaawacmey qaar kale.
Booliiska Israel ayaa weerarkan ku eedeeyey sadex nin oo reer Falastiin ah oo ay sheegeen inay ku hubeysnaayeen hubka fudud iyo mindiyo. Raggan ayey sheegeen inay rasaas ooda uga qaadeen ciidamada illaalada Israel ee ku sugnaa wadada loo yaqaan [Lion’s Gate] ee u dhaw Masjidka barakeysan ee Al Aqsa.
Kadib kooxdan hubeysan ayaa la sheegay inay u baxeen dhinaca masjikad Al Aqsaa halkaasi oo ay markale iska horimaad kula galeen ciidamada Isra’iil, waxaana la sheegay in halkaasi lagu dilay sadexdan nin ee reer Falastiin.
Maamulka masjidka Al Aqsa ayaa xaqiijiyey inay arkeen meydadka labo kamid ah oo yaala gudaha beerta weyn ee Masjidka.
Maamulka Israel ayaa sheegay in maanta oo Jimce ah aan salaada Jimce lagu tukan doonin masjidka Al Aqsa oo ay jimce walba ku tukadaan in ka badan 10.000 qof.
Waa markii ugu horeysay oo in muddo ah oo muslimiinta laga horjoogsado inay masjidka Al Aqsa ku tukadaan salaada Jimcaha, Israa’iiliyiinta ayaa xayiraad saara dadka u cibaado taga masjidka mar walba oo uu weerar ka dhaco magaalada Qudus.
Dhinaca kale Isra’iiliyiinta ayaa toogasho ku dilay wiil Falastiini ah oo 18 sano jir ah, weerar ay saaka ku qaadeen xerada barakacayaasha ee loo yaqaan Dhecisheh oo ku taal magaalada Bethlehem ee daanta galbeed ee dhulka la heysto.
Hawlgalkaasi ayey Isra’iiliyiintu sheegeen inay kusoo qabteen labo nin oo ay baadi goobayeen.
Isra’iiliyiinta ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay dilal u geystay tiro badan oo Falastiiniyiin kor u dhaafaya 250 qof, halka weerarada ay geysteen Falastiiniyiinta lagu dilay isla muddadaasi dad gaaraya 48 qof oo Isra’iiliyiin ah oo ay ku jiraan dalxiisayaal ka yimid Maraykanka iyo UK.